Shiinaha Warshad Ballaadhinaysa Neefsashada Labaad Wareeg Catheter Mount Mount iyo alaab-qeybiyeyaal. Biotek
Koodhka alaabta: BOT 126000
Waxaa loo adeegsaday isku xirka aaladda neefsashada suuxdinta.
Model: jiingado guud, smoothbore iyo ballaarin la heli karo.
1. Dabacsanaanta ugu dambeysa inta lagu gudajiro hawlgallada iyo hababka daaweynta marka hawlgalka bukaanka loo baahdo;
2.Weello xusullo go'an ama rogrogmi kara oo leh ama aan lahayn deked siineysa dabacsanaan ku saabsan maaraynta hawo-mareenka bukaanka dhammaan xaaladaha caafimaad;
3.22F ama 15MM isku xirayaasha dhamaadka si loogu xirmo dhamaan qaybaha Y ee buuxiya heerarka la ansixiyay.
- Ujeedada kateetarka kaydinta ayaa ah in la yareeyo soo jiidka tuubada endotracheal ama maaskarada laryngeal iyadoo lagu beddelayo culeyska nidaamka neefsashada bukaanka.
- Noocyada tuubbada: jiingado, ballaadhin kara iyo ceel-fiiqan
- Noocyada isku xira: xusulka, labalaabidda labalaabka leh ama aan lahayn daboolka Elastometic, eter-qufulka ect.
- Ku habboon isticmaalka suuxdinta, neefsashada iyo kiciyaha.
- Leh cabirro kala duwan, oo ku habboon carruurta iyo dadka waaweyn.
Tayada waa nolosha warshaddeena. Waxaan ku leenahay kormeere boosteejo kala duwan, waxaana jira dhowr kormeere ka hor inta aysan xirxirin si ay u helaan alaab tayo leh.
Ku saabsan goobta warshadda iyo booqashada warshad
Warshadda Biotek waxay ku taal magaalada Nanchang, Gobolka Jiangxi, Shiinaha. Waxay ku saabsan tahay 1 saac duulimaad ama 3 saacadood tareen xawaare sare leh oo ka yimaada Shanghai, Waan ku soo qaadan karnaa haddii aad u baahato,
Hore: Waxyaabaha Fasalka Caafimaadka 100ml 150ml 200ml Pca Iyo CBI Soo Saarida Faleebada
Xiga: Iibka kulul Hme filter muruqa iyo nidaamka neefsashada